I-sukari quartz - ukuthungwa okungaphezulu komhlaba kubukeka njengamakhahle kashukela - ividiyo
Amathegi Quartz, Sugar
Thenga i-quartz yemvelo esitolo sethu
I-sukari quartz iyitshe elinokukhanya okungaphezulu kwendalo okufana namakristalu amahle kashukela akhiwa yizinto zemvelo zezici ezincane ze-crystalline.
I-sukari quartz inomlando ibuyela emuva eminyakeni engama-10,000, njengoba kubhekiswa kuPaleo-Indian.
I-quartz yeshukela ayizange ibonwe noma yatholakala okuningi kusukela kuma-1900s akuqala. Noma yikuphi okutholakele osukwini lwanamuhla kubhekwa njengento engavamile kakhulu.
I-Quartz iyiminerali eqinile, ekhristali eyakhiwe ngama-athomu e-silicon ne-oxygen. Ama-athomu axhunywe ohlakeni oluqhubekayo lwe-SiO4 silicon – oxygen tetrahedra, lapho umoya-mpilo ngamunye wabiwa phakathi kwama-tetrahedra amabili, okunikeza ifomula lamakhemikhali eliphelele le-SiO2. I-Quartz iyimbiwa yamaminerali yesibili eningi kunawo wonke emhlabeni, ngemuva kwe-feldspar.
Kunezinhlobonhlobo eziningi ze-quartz, eziningi zazo ezingamatye ayigugu ayigugu. Kusukela kudala, izinhlobo ze-quartz bezingama-mineral asetshenziswa kakhulu ekwenzeni ubucwebe nokuqoshwe kwamatshe aqine, ikakhulukazi e-Eurasia.
I-Quartz ingeyohlelo lwe-trigonal crystal. Ukuma okuhle kwekristalu umcengezi onamacala ayisithupha ogcina ngemipiramidi enamacala ayisithupha ekugcineni ngalunye. Emvelweni amakristalu e-quartz avame ukuhlanganiswa, ngamakristalu e-quartz angakwesokunene nangakwesokunxele, ahlanekezelwe, noma ahlukaniswe ngamakristalu aseduze e-quartz noma amanye amaminerali ukukhombisa kuphela ingxenye yalolu hlobo, noma ukuntula ubuso obucwebezelayo obusobala ngokuphelele futhi kubonakale kukhulu. Amakristalu akhiwe kahle ngokuvamile akha 'embhedeni' onokukhula okungavinjelwe kube yize; imvamisa amakristalu anamathiselwe kolunye uhlangothi kuya kumatrix futhi kunepiramidi eyodwa kuphela yokuphelisa ekhona. Kodwa-ke, amakristalu aqedwe kabili ayenzeka lapho akhula ngokukhululeka ngaphandle kokunamathiselwa, ngokwesibonelo ngaphakathi kwe-gypsum. I-quartz geode yisimo esinjalo lapho igebe licishe libe yindilinga ngokuma, ligcwele umbhede wamakristalu akhomba ngaphakathi.
Yize amagama amaningi ahlukahlukene avela embonini yezimbiwa, izinqubo zamanje zokuqamba amagama zesayensi zibhekisa ikakhulu ekwakhiweni kwezimbiwa. Umbala ukhomba okwesibili wamaminerali we-cryptocrystalline, yize kungokokuhlonza okuyinhloko kwezinhlobo ze-macrocrystalline.
I-sukari quartz kuFluorite evela eMadagascar
I-Koi fish quartz
Amathegi Izinhlanzi ze-Koi, Quartz
Amathegi UMarcasite, Quartz
I-quartz yegolide ekhanyisiwe nge-hematite
Amathegi Golden, IHematite, Quartz, Ikhanseliwe
Amathegi Iso lika-Hawk, Quartz